ညီနေမင်း: language ပြောင်းချင်လို့ပါ
language ပြောင်းဖို့ကတော့ အောက်ကနည်းအတိုင်း စမ်းကြည့်လိုက်ပါ
(၁) start >> control panel ကို သွားလိုက်ပါ .
(၂) Clock, Language and Region >> change display language ကို ရွေးလိုက်ပါ .
(၃) Formats မှာ English (united states) ကို ပြောင်းလိုက်ပါ .
(၄) Keyboards and languages >> change keyboards ကိုရွေးပါ
(၅) General မှာ အောက်ကို ကြည့်လိုက်ပါ . Default input language မှာ English(united states) - us ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ ..
(၆) ပြီးရင် သူ့အောက်က installed services မှာ ကျွန်တော်တို့သုံးမှာက keyboard က နှစ်မျိုးပဲ သုံးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် us နှင့် Zawgyi နှစ်မျိုးပဲ သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် us keyboard နဲ့ zawgyi keyboard နှစ်ခုပဲ ချန်ထားပြီး ကျန်တဲ့ keyboard တွေကို remove ပေးလိုက်ပါ . ပြီးတာနဲ့ Ok ပေးလိုက်ပါ .
(၇) restart တောင်းရင် restart ပေးလိုက်ပါ . ဒီလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေလောက်ပြီးလို့ ထင်ပါတယ် . မပြေရင် ဆက်ပြောပါ .
Posted by ညီနေမင်း at 11:28 AM
Dennis November 29, 2009 at 4:35 PM
rhein December 17, 2009 at 3:24 PM